परदेशबाट फर्कंदा पाँच दिन हिँडेर घर पुगें
Sat, Feb 24, 2018 | 11:31:54 NST
13:47 PM (8 months ago)
राम बहादुर बस्नेत/गुल्मी, हाल कुवेत ।
२०६१ वैशाख २८ गतेको मेरो यात्रा बिर्सन खोजे पनि कहिल्यै बिर्सन नसक्ने बनेको छ । रोजगारीका क्रममा त्यति बेला म भारतको गाजियावादमा थिएँ । झण्डै डेढ वर्ष भैसकेको थियो परिवारबाट टाढिएको ।
लामो समयपछि छुट्टि पाउने पाउने भएपछि घर आउने तरखरमा थिएँ । मेरो साथमा सँगै काम गर्ने साथीले गाउँमा आफन्तलाई उपहार पठाउने भए । साथीहरुको सामन गरी झण्डै ३० किलो भयो ।
धेरै पछि घर फर्कन पाएकोमा मन खुसी थियो । तर साथीभाइसँग छुट्टिनु पर्दा दुखी पनि थिएँ । घर आउने भएपछि बिदाइका बेला साथीहरुसँग सानो जमघट गरियो । भोलिपल्ट बिहान पाँच बजे बस चढें । साथमा एक जना साथी पनि थिए ।
झण्डै २८ घन्टाको बस यात्रा पछि हामी सुनौली पुग्याैं । सुनौली सिमाका नेपाल प्रहरीको अवस्था देख्दा म चकित भएँ । मनमा अनेक प्रश्न उब्जिए । सुनेको थिएँ, सिमामा प्रहरीले पैसा लिन्छन् । नेपालीलाई ठग्छन् ।
तर त्यो दिन त्यस्तो भएन् । उनीहरुले पैसा लिएनन् । मैले सोधे, ‘दाइ किन पैसा नलिएको’ उनले जवाफ दिए, ‘के लिनु भाइ आज देखि १८ दिन नेपाल बन्द छ । बरु राम्रोसँग जाउ बाटोमा दुःख पाउलाउ ।’
मेरो हातखुट्टा गले । घर पुग्न अतालिएको मन थकित भयो । अब घर कसरी पुग्ने ? भारत फर्कौं त बल्ल बल्ल घर आइएको छ । जे होला भनेर नेपाल तिरै लागियो ।
त्यतिबेला देश संकटकालिन अवस्थामा थियो । माओवादीको युद्धको झण्डै ९ वर्ष भएको थियो । जताततै त्रास मात्र थियो । परिवार भेट्ने चाहनाले मन हतारमा थियो । म बुटवल तिर लागें ।
तराईमा गर्मी अच्चाक्ली थियो । ८ सय रुपैयाँमा रिक्सा रिर्जभ गरेर बुटवल लागियो । बुटवल आइपुग्न झण्डै चार घण्टा लाग्यो । बुटवलको नयाँगाउँ होटेलमा बस्ने व्यवस्था गरियो । १८ दिन बुटवल बस्नु भन्दा हिडेरै घरमा जाने सल्लाह भयो । भोलिपल्ट बिहान अर्थात बैशाख २९ गते तम्घास तिर लागियो ।
साथीको शरीर पातलो थियो । हिँड्न पनि सक्ने । म ८० किलो भन्दा धेरै भएकाले ज्यान पनि मोटो । हिँड्न निकै गाह्रो भयो । ३० किलोको झोला पनि साथै लैजानु पर्ने भएकाले यात्रा निकै कठिन थियो ।
पक्की सड्कको गर्मीले मेरा खुट्टाका छाला पिल्सिन थालेका थिए । एक घण्टामा चार किलोमिटर जति पार गरियो । उकालोमा साथीहरुले पनि छाडेर अगाडि गइ सकेका थिए ।
साथीहरुले पाल्पाको तानसेनमा पर्खने बताएका थिए । निकै कष्ट पछि म १२ घण्टा लगाएर साँझ ५ बजे तानसेन पुगें । मेरा साथीहरु खोजें तर भेटिन् । तानसेनमा आन्दोलन चर्किरहेको थियो ।
तानसेनको एउटा मेडिकलमा खुट्टामा मलमपट्टि बाँधेर म फेरि बाटो लागें । बेलुकीको ७ बज्यो । बतासेमा बास मागें । तर उनीहरुले खाना मिल्छ, बास मिल्दैन तल बजार जानु पर्छ भनेपछि जोर्तेमा गएर बास बसें । साथीहरु बाटोभरी कतै भेटिएनन ।
यस्ता धेरै दुःख सहेर पाँच दिनको हिडाइ पछि घर पुगें । संसार जिते झैं लाग्यो । घरमा सबै सुतिसकेका रहेछन् । ढोका ढक्ढक्याँए । तर ढोका खुलेन । माओवादीले यसरी नै राती राती ढोका ढक्ढक्याएर होला ।
रातभरी त्यसै बसें । बिहान भएपछि मात्रै परिवारसँग भेट भयो । घर पुग्दाको क्षण शब्दमा बयान गर्न सक्दिन । म त्यती खुसी थिए । तर त्यो यात्रामा भोगेका दुःख मेरो मनबाट कहिल्यै हटेन ।
‘म जन्में भनेर बाबा घर नफर्किनुभएको हो ममी ?’ ‘बाबा म जन्में भनेर घर नफर्किनुभएको हो ममी ?’ ६ वर्षकी बालिकाले यस्तो कुरा सोच्लिन अनि भन्लिन ? धेरैको उत्तर आउला यो त ठूलो भइसकेपछि मात्रै बुझ्ने र सोच्ने कुरा हो । साना केटाकेटीले कहाँ यस्तो कुरा बुझ्छन र गर्छन् ।
१५ महिनामा ३४ हजार नेपाली युएई भित्रिए दुई वर्ष अघिको तथ्याङ्क अनुसार ९१ दशमलव ६४ प्रतिशत पुरुष र ८ दशमलव ३६ प्रतिशत महिला थिए । तर यो वर्ष भने महिला र पुरुषको संख्या छुट्याइएको छैन् । श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोगार विभागका अनुसार २०५० सालदेखि २०७३ सम्ममा ४ लाख ४५ हजार ८ सय ११ जना नेपाली श्रम स्वीकृती लिएर युएई आएका थिए ।
​दु:खबाट सिकेर सुखद कथाको सुरुवात विदेशमा ‘डिसब्रेक’ बनाउन गएको थिएँ । बनाउनु त परको कुरा देख्न पनि पाइएन । अहिले टेम्पोको ब्रेकमा हात राखेदेखि मेरो दैनिकी फेरिएको छ । अझ भनौं टेम्पोको स्टेरिङ समातेसँगै मेरो जीवनले गति लिएको छ ।
अहेवलाई साउदीमा फूलबारी गोड्ने काम बसन्त आफूले गर्नुपर्ने काम देखेर छक्क मात्रै मात्रै पर्नुभएन छाँगाबाट खसै जस्तै हुनुभयो । अहेव पढेर अस्पतालमा काम गर्न गएका बसन्तलाई माली ( फुलबारीको हेरचाह गर्ने ) को काम लगायो ।
मलेसियामा अलपत्र १० जना नेपालीको उद्धार
काठमाडौं, फागुन ११ – घर फर्किने पैसा नभएर मलेसियामा अलपत्र परेका १० जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ ।
शुक्रबार दिनार र मलेसियन रिंगिटको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं, फागुन ११ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २७ रुपैयाँ ६७ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको छ ।
क्यान्सर पीडित पारसलाई बेलायतबाट सहयोग
काठमाडौं, फागुन १० – सुनसरीको तरहराका क्यान्सर पीडित ७ बर्षीय पारस कार्कीको उपचारका लागि बेलायतमा सङ्कलन गरिएको रकम परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।